Pele “Messi in uu isoo gaaro wuxuu u baahan yahay shaqo adag oo dheer waana in…” – SBC
Pele “Messi in uu isoo gaaro wuxuu u baahan yahay shaqo adag oo dheer waana in…”
Boqorka kubada cagta aduunka ee reer Brazil Edson Arantes do Nascimento Pele ayaa ku tilmaamay in xiligan lala mid dhigo laacibka kooxda Barcelona & qaranka Argentina Lionel Messi, balse hadii uu u baahan yahay in uu gaaro heerkiisa ay tahay mid u baahan shaqo badan.
Pele oo 71 sano jir ah oo la waydiiyey in la oran karo in Messi uu hanan karo darajadiisa iyo rikoorkiisa mid la mid ah oo dhanka kubada cagta ayuu wuxuu hadalkaasi ka dhigay mid aan waxba ka soo qaad laheyn, isagoo hoos u eegay Messi kuna tilmaamay in looga baahan yahay in uu dhaliyo 1,283 gool, in uu ku guuleysto sadex jeer koobka aduunka.
“Marka goolashaashi kunka badan uu dhaliyo uu soo xareysto sadex koob oo koobka aduunka ah, ayaan wada hadli donna” ayuu yiri Pele oo wareysi siiyey wargeyska Le Monde ee ka soo baxa wadanka Faransiiska.
Messi oo 24 sano jir wuxuu markii sadexaad oo isku xigta uu ku guuleystey abaalmarinta sanadlaha ee laaciibka aduunka ee loo yaqaan FIFA Ballon Dd’Or.
Pele wuxuu sheegay in Messi loogan baahan yahay in uu ka sameeyo horumar sidii uu wadankiisa Argentine uu ugu dhalin lahaa goolal fara badan.
Messi wuxuu kooxda Barcelona la qaaday sadex koobka Champions League iyo waliba shan koobka horyaalka La Liga ee Spain.
Laakiin koobka kaliya ee wadankiisa uu kula guuleystay waa kii ciyaaraha kubada cagta ee Olympics Games 2008 ee wadanka Shiinaha lagu qabtey.
Pele wuxuu wadankiisa Brazil u horseeday in uu ku guuleysto koobka aduunka sanadihii 1958, 1962 iyo 1970.
“Messi waan jeclahay, waa ciyaaryahan weyn, farsamo ahaan isku heer ayaynu nahay, marka uu u ciyaarayo Barcelona waa ciyaaryahan sare laakiin marka ay timaado qaranka Argentine ma haysto guul la mid ah taasi” ayuu yiri Pele.
“Dadku markasta waxay I waydiiyaan, ‘marka uu dhalin doono Pele cusub?’, laakiin Hooyadey iyo Aabahey warshadaasi way xireen” ayuu ku faanay Pele.